IJabra Elite 75t, uhlalutyo lwemveliso ejikeleze kakhulu | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 27/03/2021 15:00 | elektroniki, Reviews
Siyaqhubeka ukuhlalutya iimveliso zomsindo, ngakumbi ii-headphone I-TWS Ezona ntengiso zithelekiswayo ukuze zikunikeze ezinye iindlela etafileni kunye nokuququzelela ukhetho lwemveliso efanelekileyo iimfuno zakho kunye noqoqosho lwakho, kwaye ngokulandelelana kwezinto, ii-headphone ezintsha zifika kwitafile yethu.
Sithetha ngenye yeemveliso ezivuthiweyo zikaJabra, ii-headphones ze-Elite 75t, fumana uhlalutyo lwethu olunzulu ngevidiyo kunye ne-unboxing eneenkcukacha. Sikuxelela ukuba amava ethu abe yintoni kwaye ukuba kufanelekile ukuthenga ezi ntloko ze-TWS ekuthethwe ngazo kakhulu.
Njengakwezinye izihlandlo ezininzi, sinevidiyo ephezulu apho uya kuba nakho ukuxabisa i-unboxing, amathuba ayo oqwalaselo kwaye zonke iinkcukacha zohlalutyo olunzulu lwemveliso, ke sicebisa ukuba ujonge ngaphambi okanye emva kokufunda uhlalutyo oluneenkcukacha. Thatha ithuba lokubhalisa kwisitishi sethu, usishiye nayiphi na imibuzo kwibhokisi yezimvo kwaye ke ukwazi ukusinceda ukuba siqhubeke nokuzisa olu hlobo lomxholo, Ngaba bakweyisile? ungazithenga ngexabiso elinomdla kakhulu kwiAmazon.
1 Izixhobo kunye noyilo: Ukusebenza kunye nokumelana
2 Iimpawu zobugcisa nezandi
3 Ukuzimela kunye nenqanaba lonxibelelwano
4 Umgangatho womsindo kunye neJabra Sound + app
Izixhobo kunye noyilo: Ukusebenza kunye nokumelana
Sithetha ngee-headphones ze-TWS ezisezindlebeni ezinoyilo olwahluke mpela, icandelo elicinezelweyo, ngaphandle kobude ngaphandle, kwaye isiseko senkxaso yabo ngokupheleleyo kwiphedi edityaniswe kwindlebe. Zilingana kakuhle, kwaye zibonakala zingangeni kwiimvavanyo zethu zemidlalo, kodwa ngenxa yoku kuya kufuneka unike umqamelo olungele eyona ndlebe yakho. Zinobunzima obuncinci kakhulu, zijikeleze iigram ezingama-5,5 kwifowuni nganye, enobunzima obucinezelweyo. Ngapha koko, xa sinikwe iplastiki ye-matte, sinokucinga ukuba umgangatho ulungile, into ekude kakhulu nenyani, kubonakala ngathi yimveliso enganyangekiyo kuvavanyo lwethu kwaye ukukhanya kwayo kuyathandwa xa sisolula ukusetyenziswa.
Ubunzima bebhokisi ye-Shit: i-35 grams
Ubunzima bomnxeba ngamnye weendlebe: 5,5 iigrem
Ubungakanani bebhokisi: 62.4 x 19.4 x 16.2 mm
Imibala: Mnyama, ngwevu kunye negolide
Ngokubhekisele kwimeko, uyilo oluxandileyo kunye noxande olunamagophe amaninzi, inobunzima bayo bebonke I-35 gram kwaye inezalathi, ngokunjalo izibuko le-USB-C ngasemva. Kuyinto enganyangekiyo, ukubamba okumnandi kunye nokwenziwa okusinika imvakalelo esemgangathweni. Akufanele silibale ukuba ezi ntloko ziqinisekisiwe nge-IP55, Nangona bengena emanzini, olu luhlu luya kusiqinisekisa ubuncinci ukuba sinokuzilolonga ngaphandle koloyiko lokubandezeleka kukubila okanye kukuchaphazeleka okungafunekiyo.
Iimpawu zobugcisa nezandi
Siqala ngento ebalulekileyo, isandi, sinebhendi yesithethi I-20 Hz ukuya kwi-20 kHz yezithethi xa zidlala umculo kunye ne-100 Hz ukuya kwi-8 kHz kwimeko yeefowuni. Yayo, isinika umqhubi wefowuni nganye ye-6mm ngamandla aneleyo, kwaye iya kuhamba kunye Ii-microphone ezine zeMEMS oko kuyakusinceda ukuba sinike iifowuni ezicacileyo. Ukuba ufuna ukwazi ukuba iminxeba iviwa njani, ungajonga ividiyo, apho senza khona uvavanyo lwemakrofoni, ngokufutshane sUyazikhusela kwaye enze iminxeba kunye nabo, ethathela ingqalelo ukuba banokukhuseleka emoyeni, yamkelekile.
Asinakho ukurhoxiswa kwengxolo, sinokurhoxiswa kwengxolo eyondliweyo yimilo yeepads kwaye oku kuya kuxhomekeka kakhulu kwindlela esizibeka ngayo. Ukwenza oku, njengoko besitshilo ngaphambili, sisebenzise iipads zabo ngobukhulu obahlukeneyo. Ukucinywa kwengxolo kungaphumeleli, kuyabonisa ukuba basebenze kule nkalo kwaye kungaphezulu nje ngokwaneleyo ukuphatha ezothutho lukawonkewonke mihla le ngaphandle kweefrills ezininzi.
Ukuzimela kunye nenqanaba lonxibelelwano
Ngokubhekisele kwibhetri, asinayo idatha ethile malunga ne-mAh ephethwe yintloko nganye yentloko kunye netyala elithile lokutshaja. Ewe, kufuneka sigxininise ukuba isiseko esisezantsi setyala lokutshaja siyahambelana nefayile ye- Ukutshaja ngaphandle kwamacingo kunye nomgangatho weQi. Kwelakhe icala, yenaUkuhlawulisa ngokukhawuleza kuya kusivumela ngemizuzu eli-15 ukuya kwimizuzu engama-60 yokuzimela, sithathe ixesha elingaphezulu kweyure ukugcwalisa intlawulo epheleleyo.
Memoria ukuvumelanisa: izixhobo ezi-8
Umda: malunga neemitha ezili-10
Iiprofayili I-Bluetooth: HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, SPP v1.2
Ngokwenxalenye yayo, enkosi ngonxibelelwano lweBluetooth 5.0 kunye neeprofayili zayo ezihambelanayo, ukuzimela okuthenjisiweyo kweeyure ezisi-7 phantse kulandelwe ngokuthe ngqo, eyahluka kancinane kuxhomekeka kumthamo omkhulu esithe sawabela wona.
Umgangatho womsindo kunye neJabra Sound + app
Ezi ntlobo zezicelo, ngokunyaniseka, zibonakala kum njengexabiso elibaluleke kakhulu. Via Jabra Isandi +, ziyafumaneka kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android, uya kuba nakho ukwenza ngokwezifiso iiparameter ezininzi zeefowuni ezakwenza ukuba amava akho aphelele. Ngale ndlela sisebenzisa i-HearTrhoug Ukunciphisa ingxolo yomoya, khetha umncedisi welizwi, ukubanakho ukukhangela ii-headphone zethu kwaye ngaphezulu kwazo zonke izinto ezihlaziyiweyo ziyafumaneka kwi app (kwividiyo yethu ungayibona isebenza).
Usetyenziso lwe-iOS> LINK
Inkqubo ye-Android> LINK
Ngokuphathelele isandi, IJabra Elite 75t Ndilothuswe linqanaba eliphezulu levolumu ebonelelweyo, ethi igubungele kakhulu ukungahambi kwengxolo esebenzayo. Nangona kunjalo, ii-bass ziphawulwe ngokugqithiseleyo ukuthanda kwam, into esinokuyicombulula ngokulingana kwe-app. Kwezinye iithowuni, zibonakala zilungelelaniswe kakuhle kwaye zibonelela ngomgangatho ohambelana ngqo nexabiso lemveliso.
Okokugqibela, siza kuthetha ngexabiso, ungazithenga ngezibonelelo ezithile ezivela kwi- € 129 kwiindawo eziqhelekileyo zentengiso ezinje ngeAmazon okanye iwebhusayithi ye Jabra. Sele uyazi ukuba sihlala sicebisa elona xabiso lemali. Kule meko unee-headphone ngexabiso elithile eliphakamileyo kuthathelwa ingqalelo ukusebenza, kodwa ngesiqinisekiso sokuba uJabra uyayikhathalela, yamkelwe kwihlabathi liphela ngolu hlobo lwemveliso. Nangona kunjalo, kuthathelwa ingqalelo ukuba bakude kangakanani na kwintengiso, unokukhetha ezinye iindlela ezinexabiso elingcono lemali okanye nangokurhoxiswa kwengxolo okusebenzayo.
IJabra Elite 75t
Ithunyelwe nge: 27 Matshi we2021
Utshintsho lokugqibela: 26 Matshi we2021
Isicelo esiphumelele kakhulu
Uyilo lweNkulumbuso kunye nokuziva
Umgangatho olungileyo weaudiyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » IJabra Elite 75t, uhlalutyo lwemveliso ejikeleze kakhulu
IHuawei isungula uhlelo lweWatch Fit Elegant, esona sitshipi sinexabiso eliphantsi